FBC - Bara 2030tti baay’inni namoota tamboo xuuxuun wagga waggaatti du’anii miliyoona 8 ga’a: Dhaabbata Fayyaa Addunyaa
Bara 2030tti baay’inni namoota tamboo xuuxuun wagga waggaatti du’anii miliyoona 8 ga’a: Dhaabbata Fayyaa Addunyaa
Finfinnee, Amajjii 02, 2009 (FBC) Rakkoolee tamboo xuuxuu waliin wal-qabataniif waggaa waggaan sadarkaa idil-addunyaatti Doolaarri Ameerikaa tiriliyonni 1 niba’a.
Akka qorannoo Dahaabbati Fayyaa Addunyaa fi Inistitiyuutiin Kaasarii Biyyaalessaa Ameerikaa geggeessaniitti bara Faranjootaa 2030 jalqabee baay’inni namootaa tamboo xuuxuun waggaa waggaatti du’anii miliyoona 8 ga’a.
Qorannichi baasiin biyyoonni addunyaa tamboo xuuxuun wal-qabatee baasan galii ashuuraa tamboo irraa argamu baay’ee akka caalu ibseera.
Akka fakkeenyaattis bara 2013/14tti galiin ashuuraa oomisha tamboo irraa argame Doolaara Ameerikaa 269 ta’uusaa Dhaabbati Fayyaa Addunyaa eereera. Kunis baasii isaa waliin wayita wal-bira qabamee ilaalamu baay’ee gadi aanaa ta’uusaa ibseera.
Baay’inni namoota dhibeewwan tamboon wal-qabataniin du’anii bara 2030tti miliyoona 6 gara miliyoona 8 ni guddata; dhibbantaa 80 ol saaxilamoo kan ta’an ammo biyyoota galii giddu-galeessaa qaban akka ta’an qorannichi eereera.
Qorannoon qorattoota 70 oliin gamaggamame kun sadarkaa idil-addunyaatti baay’inni namoota tamboo xuuxanii dabalaa akka jiru eereera.
Miidhaan tamboon dinagdee addunyaa irraan ga’u ammas itti-fufa kan jedhe qorannichi, biyyoonni baay’ina fayyadamtoota tamboo fi du’a isaan wal-qabatee uumamu hir’isuuf maloota gara-garaa faluu qabu jedheera.
Bu’aan qorannoo fuula 688 qabu kun mootummoonni sodaan tamboo too’achuun dinagdee keenyarra dhiibbaa geessisa jedhu isaanii sababa qabatamaa akka hin-qabne ibseera.
Oomishaalee tamboo irra taaksii guddaa kaa’uu fi gatiisaanii mi’eessuu, imaammatawwan tamboo xuuxuu dhorkan baasuu, beeksisa oomishaalee tamboo dhorkuu akkasumas ergaawwan akeekkachiisaa maxxansuun baay’ina namoota xuuxanii hir’isuuf gargaaru jedhamanii eeramaniiru.
Maallaqa ashuuraa oomishaalee tamboo irraa argamu keessaas sochiiwwan farra-tamboo dhaabbilee sab-quunamtiin taasifamanii oolchuu barbaachisa jedheera.
Ogeeyyiin fayyaa sadarkaa idil-addunyaatti du’a sababa tamboon mudataa jiru hir’isuu yookiin dhaabuun salphaa ta’uu dubbatu. Xuuxuu dhaabuun…
Oduuwwan Biroo « Wantoota ganama raawwannu keessaa maaltu badaadha?	Lakkoofsi namoota dhiibbaa dhiigaa cimaaf saaxilaman dabalaa jira –qorannoo »